October 7, 2021 - Celegroup
October 7, 2021 cele group 0
ကမ္ဘာကျော်ဘောလိဝုဒ်ဝါရင့်သရုပ်ဆောင်ရှာရွတ်ခန်းလေယာဉ်Accidentဖြင့်သေဆုံး မင်းသားကြီး ရှရွတ်ခန်းဟာဒေလီမှာ ရှူတင်ရိုက်ပြီး မွန်ဘိုင်းသို့အပြန်Air India လေယာဉ်ဖြင့်လိုက်ပါလာခဲ့စဉ်ယနေ့ မွှန်းလွှဲ ၁၂:၃၆မိနစ်မွန်ဘိုင်း လေဆိပ်သို့အရောက်ထိုလေယာဉ်စက်ချို့ယွင်းမှုဖြစ်ပြီး ပျက်ကျပြီးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါ လေယာဉ်ပျက်ကျမှုတွင်မင်းသားကြီး ရှာရွတ်ခန်းနှင့်အတူအခြားခရီးသည် ၁၀၉ ဦးလည်းသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်… ဘောလိဝုဒ်ကြယ်ပွင့်ဟာသူ့ရဲ့ကောင်းမွန်လွန်းတဲ့သရုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတကာကပါအသိမှတ်ပြုခံရသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဘောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်လောကအတွက်တော့တော်တော်ကိုနစ်နာရတယ်လို့လည်းရပါတယ်… Admin team ကလည်း မင်းသားကြီးရှာရွတ်ခန်းကောင်းရာသုဂတိလားပါစေလို့စိတ်နှလုံးညှိုးငယ်စွာဖြင့်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်… ကမ္ဘာကျော်ဘောလိဝုဒ်ဝါရင့်သရုပ်ဆောင်ရှာရွတ်ခန်းလေယာဉ်Accidentဖြင့်သေဆုံး မင်းသားကြီး ရှရွတ်ခန်းဟာဒေလီမှာ ရှူတင်ရိုက်ပြီး မွန်ဘိုင်းသို့အပြန်Air India လေယာဉ်ဖြင့်လိုက်ပါလာခဲ့စဉ်ယနေ့ မွှန်းလွှဲ ၁၂:၃၆မိနစ်မွန်ဘိုင်း လေဆိပ်သို့အရောက်ထိုလေယာဉ်စက်ချို့ယွင်းမှုဖြစ်ပြီး ပျက်ကျပြီးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါ လေယာဉ်ပျက်ကျမှုတွင်မင်းသားကြီး ရှာရွတ်ခန်းနှင့်အတူအခြားခရီးသည် ၁၀၉ ဦးလည်းသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ် […]
ကမ္ဘာကျော်ဘောလိဝုဒ်ဝါရင့်သရုပ်ဆောင်ရှာရွတ်ခန်းလေယာဉ်Accidentဖြင့်သေဆုံး မင်းသားကြီး ရှရွတ်ခန်းဟာဒေလီမှာ ရှူတင်ရိုက်ပြီး မွန်ဘိုင်းသို့အပြန်Air India လေယာဉ်ဖြင့်လိုက်ပါလာခဲ့စဉ်ယနေ့ မွှန်းလွှဲ ၁၂:၃၆မိနစ်မွန်ဘိုင်း လေဆိပ်သို့အရောက်ထိုလေယာဉ်စက်ချို့ယွင်းမှုဖြစ်ပြီး ပျက်ကျပြီးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါ လေယာဉ်ပျက်ကျမှုတွင်မင်းသားကြီး ရှာရွတ်ခန်းနှင့်အတူအခြားခရီးသည် ၁၀၉ ဦးလည်းသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ် ဘောလိဝုဒ်ကြယ်ပွင့်ဟာသူ့ရဲ့ကောင်းမွန်လွန်းတဲ့သရုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတကာကပါအသိမှတ်ပြုခံရသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဘောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်လောကအတွက်တော့တော်တော်ကိုနစ်နာရတယ်လို့လည်းရပါတယ် Admin team ကလည်း မင်းသားကြီးရှာရွတ်ခန်းကောင်းရာသုဂတိလားပါစေလို့စိတ်နှလုံးညှိုးငယ်စွာဖြင့်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် ကမ္ဘာကျော်ဘောလိဝုဒ်ဝါရင့်သရုပ်ဆောင်ရှာရွတ်ခန်းလေယာဉ်Accidentဖြင့်သေဆုံး မင်းသားကြီး ရှရွတ်ခန်းဟာဒေလီမှာ ရှူတင်ရိုက်ပြီး မွန်ဘိုင်းသို့အပြန်Air India လေယာဉ်ဖြင့်လိုက်ပါလာခဲ့စဉ်ယနေ့ မွှန်းလွှဲ ၁၂:၃၆မိနစ်မွန်ဘိုင်း လေဆိပ်သို့အရောက်ထိုလေယာဉ်စက်ချို့ယွင်းမှုဖြစ်ပြီး ပျက်ကျပြီးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါ လေယာဉ်ပျက်ကျမှုတွင်မင်းသားကြီး ရှာရွတ်ခန်းနှင့်အတူအခြားခရီးသည် ၁၀၉ ဦးလည်းသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ် […]
အနာအဆာပါတိုင်း တန်ဖိုးမဲ့တယ်ဆိုရင်( ဖတ်ကြည့်ပါ အရမ်းကောင်းတယ် )
အနာအဆာပါတိုင်း တန်ဖိုးမဲ့တယ်ဆိုရင်( ဖတ်ကြည့်ပါ အရမ်းကောင်းတယ် ) အနာအဆာပါတိုင်း တန်ဖိုးမဲ့တယ်ဆိုရင် ဆန်ထဲ ကြွက်ချေးပါလာရင်ဆန်အကုန်လုံးကို သွန်ပစ်မယ့်အစား ကြွက်ချေးကို ဖယ်စားသင့်တယ်အနာပါတဲ့ ငှက်ပျောသီးတစ်လုံးက ဆာလောင်ငတ်မွတ်နေသူအဖို့ကတော့ အနာဖယ်ပီးစားတတ်ရင် အာဟာရဖြစ်မယ်။ ထို့အတူပါပဲ လူ့လောကမှာ လူလူချင်းပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာအားနည်းချက်ရှိသူ အချင်းချင်း အပြစ်အနာအဆာတွေကို အပြန်အလှန်ဖေးမတည့်မတ်ရင်း အနာအဆာကိုဖယ်ပီးပေါင်းသင်းတတ်သွားရင် အမြင်ကျယ်ပီး ရင့်ကျက်တဲ့ လူတွေဖြစ်လာမှာပါ။ အမြင်မတူပေမယ့် နှလုံးသားတူရင် သွေးမတော်သားမစပ် သူစိမ်းတွေတောင်လင်နှင့်မယားဆိုတာ ဖြစ်လာကြသေးတာပါပဲ။ လောကမှာ တူညီတဲ့အရာတွေပဲ တစ်သားတည်းဖြစ်အောင် ပေါင်းစည်းလို့ရနေတာ […]
မိန္းကေလးတိုင္းသိထားသင့္တဲ့ ဝိသာခါကို သူ႔အေဖဆုံးမတဲ့ စကား(၁၀)ခြန္း
၁။ အိမ်တွင်းမီး အပြင်မထုတ်နဲ့။ (အိမ်တွင်းရေးပြဿနာတွေကို အပြင်မှာဖောက်သည် မချနဲ့) ၂။အိမ်ပြင်မီး အတွင်းမသွင်းနဲ့။ (အပြင်က ပြဿနာတွေကို အိမ်တွင်းထဲ သယ်မလာနဲ့) ၃။ပြန်ပေးမယ့်သူကိုသာ ပေးပါ။ (ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုပြန်တောင်းလို့ရမယ့်သူကိုသာ ချေးငှားပါ) ၄။ပြန်မပေးမယ့်သူကို မပေးနဲ့။ (ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုပြန်တောင်းလို့မရမယ့်သူကို မချေးငှားနဲ့) ၅။ပေးသင့်သူကိုလည်း ပေးပါ။ (ဆွေမျိုးအသိုင်းအဝိုင်းမှာ ဘဝပေးအရမပြည့်စုံတဲ့သူတွေကို ဘာမှမမျှော်လင့်ဘဲ ထောက်ပံ့လိုက်ပါ) ၆။ကောင်းကောင်း ထိုင်ပါ။ (မိဘ၊ယောက္ခမ၊ခင်ပွန်းရဲ့ အထက်အရပ်၊ လေညာအရပ်စသော အပြစ်မလွတ်သောနေရာတွင် မထိုင်ဘဲ အပြစ်ကင်းသောနေရာမှာ ထိုင်ပါ) […]
ဆရာမလေးရဲ့မေးခွန်းကြောင့် မျက်လုံးပြူးသွားရတဲ့ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးအဖြစ်
” တက္ကသိုလ်သာ ပို့လိုက်ပါတော့ ဆရာမ” သုံးတန်းကျောင်းသားက ဆရာမကို လာပြောတယ်။ ” ကျနော်က …ကျနော့ညီမထက် တော်တယ်။ သူကတော့ လေးတန်းမှာ” ဒီလို ….ဒီလိုနဲ့….အမြဲပြောနေတော့ဆရာမ က…သူ့ကို …..ကျောင်းအုပ် ဆရာကြီးဆီခေါ်သွားခဲ့တယ်။ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးက လေးတန်းစာ….စစ်ကြည့်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်။ ” ၃ + ၃”” ၆ ” ” ၆+၆ “”၁၂ ” ……. ? (—— ) ……. […]
ဖေဖေမရှိတော့တဲ့နောက် သမီးအရမ်းပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ် ဖေဖေ
ချစ်ရတဲ့ ဖေဖေရေ… ဖေဖေဆုံးတာ ဒီနေ့ဆို (၂) နှစ်ပြည့်ပြီနော်။ နှလုံးဖောက်တာကြောင့် အိပ်နေရင်းကနေ ရုတ်တရက်ဆုံးပါးသွားတဲ့ ဖေဖေ့ကြောင့် သမီး ယူကျုံးမရဝမ်းနည်းရသလို တစ်ဖက်ကတွေးကြည့်ရင်လည်း ဝမ်းသာမိပါတယ်။ ဝမ်းသာမိတယ်ဆိုတာက ဒီလိုပါ။ ဖေဖေဘဝတစ်လျှောက်လုံးသောက်ခဲ့တဲ့ စီးကရက်ဒဏ်တွေ၊ အလုပ်ဒဏ်တွေ၊ စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်တွေကြောင့် ဖေဖေကင်ဆာဖြစ်မှာကို သမီး သိပ်စိုးရိမ်တာ။ ကင်ဆာဝေဒနာရှင်တွေရဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်က သိပ်ကို နာနာကျင်ကျင်ခံစားရတယ်တဲ့။ ဒီလိုမျိုး ဖေဖေ မနာမကျင်ဘဲ သက်တောင့်သက်သာ ဆုံးပါးသွားတာကို သမီး ဝမ်းသာမိတာပါ။ ဒါပေမဲ့ […]
အချော့ဆို အရမ်းကြိုက်တဲ့ တနင်္ဂနွေသားသမီးလေးတွေအကြောင်း
တနင်္ဂနွေသားသမီးလေးတွေဟာ အပျင်းကြီးပါတယ်။ ဘယ်လောက်ထိ ပျင်းသလဲဆိုရင် ပျင်းဖို့တောင် ပျင်းနေတဲ့သူတွေပါ။ ဉာဏ်ကတော့ ကောင်းကြပါတယ်။ တခြားသူတွေ အမြင်မှာတော့ လူလိမ္မာလေးလို့ ထင်ရပေမယ့် အိမ်မှာဆို အော်ကြောလန်တွေပါ။ ချောတာမျိုး မဟုတ်ပေမယ့် ချစ်ဖို့ ကောင်းကြတယ်။ အငြင်းသန် လိုက်တာလဲ လွန်ရော။ သူတို့နဲ့ ပြိုင်ငြင်းမယ့်အစား ကျားဖင်သာ ပြေးနှိုက်လိုက်ပါ။ အလုပ်တစ်ခု လုပ်ရင်လဲ ကိုယ့် အသိစိတ်နဲ့ကိုယ် လုပ်တယ်။ သူတို့ကို အမိန့်ပေးရင် လုံးဝမကြိုက်ဘူး။ မသိတဲ့ လူတွေနဲ့ […]
တခါတုန်းက ပျော်ပျော်နေတတ်ပြီး သဘောလည်း အရမ်းကောင်းတဲ့ အဘိုးအို တစ်ယောက် ရှိတယ် ။ အဲဒီအဘိုးအိုဟာ အပူအပင် ကင်းတာကြောင့် ညညဆို ခေါင်းအုံးနဲ့ ခေါင်း ထိတာနဲ့ တပြိုင်နက် အိပ်ပျော်လေ့ ရှိပါတယ်။ နောက်တခုက အဖိုးအိုမှာ အင်မတန် ရှည်လျားတဲ့ အဖြူရောင် မုတ်ဆိတ်လည်း ရှိပါသတဲ့ ။ အာရပ် အဖိုးဟာ အဲဒီကိစ္စ နှစ်ခုလုံးကို သူ့ကိုယ်သူ ဂုဏ်ယူနေလေ့ ရှိတယ် ။ သူ့နဲ့ […]
တစ်ခါက ဝံပုလွေ တစ်ကောင်ဟာ သားကောင် တစ်ကောင်ကို အငမ်းမရ စားနေရင်း လည်ချောင်း ထဲမှာ အရိုး တစ်ချောင်း ကန့်လန့်ဖြတ် ခံသွားတယ်။ အဲ့ဒီအရိုးကို အန်ထုတ်လို့လည်း မရ ၊ မျိုချ လို့လည်း မရတာကြောင့် လည်ချောင်းမှာ နာကျင်တဲ့ ဝေဒနာ ခံစားနေရတဲ့အပြင် နောက်ထပ် ဘာအစား အသောက်မှ ထပ်စားလို့ မရတော့လို့ ဆာလောင်တဲ့ ဝေဒနာကိုပါ ခံစား နေရတယ် ။ အဲ့ဒါနဲ့ […]
သားဖြစ်သူအဆိုတော်ရေမွန်ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာ (၆)လပြည့်တဲ့နေ့မှာ ထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်မက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြလာတဲ့ ရေမွန်ရဲ့မိခင်
သားဖြစ်သူအဆိုတော်ရေမွန်ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာ (၆)လပြည့်တဲ့နေ့မှာ ထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်မက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြလာတဲ့ ရေမွန်ရဲ့မိခင် ေရမြန္မိခင္ကတြတ္ပီဆုံးသြားၿပီးတဲ့ေနာက္အေမက အိပ္မက္တာႏွစ္ႀကိမ္ဘဲရွိေသးတယ္။တစ္ႀကိမ္ကသူဆုံးတာ၃လျပည့္ဖို႔တစ္ရက္အလိုသူ႔ပါးကိုနမ္းေနတဲ့တက္တူးပုံ‌ေလးအိပ္မက္ထဲမွာဝမ္းသာအားရျပလိုက္တယ္။ သူကေတာ့မ်က္ႏွာမေကာင္းဘူးႏြမ္းဖတ္ဖတ္နဲ႔အဝတ္အစားလဲဟိုမွာေနတုန္းဝတ္ခဲ့သလိုခပ္ႏြမ္းႏြမ္းအေမကိုေ ခါင္းၿငိမ့္ျပတယ္။ ဒီေန႔သူ႔ရဲ႕ေသျခင္းတရားရွိရာဆီတက္ေရာက္သြားတာ၆လျပည့္ၿပီ။ ဒီမနက္ေစာေစာသူ႔ကိုအိပ္မက္မက္တယ္။ေဘာလုံးကြင္းလိုကြင္းျပင္ႀကီးမွာသူ႔ Show ပြဲခ်န္ခဲ့သီခ်င္းIntro တီးသံၾကားေတာ့သူ႔ ဆီအေျပးသြားနံမည္ေအာ္ေခၚၿပီးဖက္ငိုေတာ့သူကအေမကိုျပန္ဖက္ထားတယ္ မ်က္ႏွာကလဲမႈန္ရီရီနဲ႔Show ပြဲမို႔ဝတ္ေကာင္းစားလွနဲ႔ၿပီးေတာ့သူခ်န္ခဲ့စဆိုေတာ့သူ႔ညီမနဲ႔ေနာက္တစ္ေယာက္က ဟာမိုနီလိုက္ေပးတာၾကားေနရတယ္။ ကိုယ္လွည့္ထြက္ရင္းစဥ္းစားေနတာသူဆုံးသြားၿပီးၿပီသူဘယ္လိုလုပ္ၿပီးလာဆိုတာလဲလို႔မနက္ႏိုးေတာ့သူ႔အေၾကာင္းေတြးရင္ းအျဖစ္အပ်က္ေတြဟာ အခ်ိန္ပိုင္းရက္ပိုင္းမွာအလ်င္အျမန္ေျပာင္းလဲလိုက္တာမ်ားအခ်ိန္ေတြေနာက္ျပန္လွည့္လို႔ရရင္သိပ္ေကာင္းမွာဘဲ ဒါမွမဟုတ္ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တာေတြ အိပ္မက္သာျဖစ္မယ္ဆို ယ္‌ေလာက္သာယာလိုက္မလဲလြမ္းလြန္းလို႔ ထိမ္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ၾကားကဒီေန႔ ငိုမိလိုက္ၿပီေလးေလးဘယ္ဆီေရာက္ေနၿပီလဲအဆင္ေရာ ေျပရဲ႕လားအေမ့ကိုေရာသတိရေသးရဲ႕လားဆိုၿပီးေရမြန္အေမက ဝမ္းနည္းစြာေျပာျပလာ တာဘဲျဖစ္ပါတယ္။ Credit Unicode သားဖြစ်သူအဆိုတော်ရေမွန်ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာ (၆)လပြည့်တဲ့နေ့မှာ ထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်မက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြလာတဲ့ ရေမွန်ရဲ့မိခင် ရေမွန်မိခင်ကတွတ်ပီဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်အမေက […]